Ntinye 50 n'efu maka ndị nna nwere ekele - pisklak.net
Ntinye 50 n’efu maka ndị nna nwere ekele
Onweghị ebe dị mma maka ikenye akụkọ gị pụrụ iche na akụkọ pụrụ iche karịa blọgụ anyị. Anyị na-agbasi mbọ ike iji mee ka blọọgụ nke cha cha cha cha cha bụ ihe ga – eme ka ndị na – agụ akwụkwọ anyị kwụsie ike Ọzọkwa, maka echiche gị niile banyere isiokwu enyere ụgwọ ọrụ. Ugbu a, na-eme ememe Father’sbọchị Nna ma na-enwe ekele maka ọrụ ndị nna na ndụ gị, anyị na-akpọ gị òkù ka ị nweta 50 free spins maka azịza nye ajụjụ anyị.
Etu esi enweta ego iri abụọ na atọ?
Ofzọ nke inweta freebies ndị a karịrị mfe. Naanị, ka anyị mata onye amara bụ ezigbo nna na ihe kpatara ya. Anyị ji n’aka na ị ga-eme ihe n’eziokwu ma na-atụ anya ịza ajụjụ gị. Dị ka ị na-emebu, dee echiche gị na ihe ndị dị n’okpuru post a ma gbakwunye aha njirimara cha cha. Anyị ga na-egwu ruo mgbe June 24th, 2021 na free spins ga-esichara ndị na-esonụ izu.
Usoro nke Nkwalite
Nkwalite Blog dị naanị maka ndị na-edebe ego. Nkwalite dị mma maka igwu egwu oghere na-enweghị ọganihu naanị (ewepu RTG777) Nkwalite ga-adịgide ruo mgbe June 24th, 2021 na spins n’efu ga-edozi n’izu na-esote. Ekwesịrị iji usoro ntozu mezuo site na July 2nd, 2021 na nke kachasị ọhụrụ, nke bụkwa oge ngwụcha maka ntụgharị niile ka hazie. Enweghị nkwalite ego efu abụọ dị n’etiti nkwụnye ego. Ndị egwuregwu niile tozuru etozu ga-enweta 50 n’efu, na-enye ha mezuo ntozu ntozu site na ụbọchị akọwapụtara. Otu onye / akaụntụ / ezinụlọ / Adreesị IP nwere ike ịnweta nkwalite a naanị otu oge. Kwesịrị ịkwado free spins winnings 45x tupu ndọrọ ego. Onu ego kachasiri elu bu $ / € 50. Onu ogugu nile di n’okpuru ngalaba Bonus na Nkwalite nke Usoro Oru anyi. Maka ọdịmma nke ịgba egwu egwu, ịkwanye ihe karịrị $ / € 10 kwa ntanye mgbe ị na-egwu egwuregwu ọ bụla nke egwuregwu anyị na-enweghị ọganihu ga-eme ka mmeri niile ghara ịba uru mgbe ị na-egwu ego a na-ekwu.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ igwu egwu na ezigbo ego, echefula ịzọrọ maka nkwado Nna Father’sbọchị pụrụ iche site na ịgbapụta koodu FATHERSDAY. Maka nkwụnye ego kacha nta nke $ 35, ị ga-enweta 45% BOOST na-enweghị egwuregwu na enweghị njedebe ego!